Lalànan'ny fiarovana sosialy | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Lalàna fiarovana ara sosialy
Manan-jo hahazo vintana aho, 51 nandritra ny herintaona, misotro ronono avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany, taona maromaro nanompoana mihoatra ny 25 taona,
Manan-jo handray veteranin'ny mpiasa ve aho, 51 taona aho, misotro ronono avy amin'ny minisiteran'ny Atitany, ny faharetan'ny asa fanompoana amin'ny fe-potoana kalandrie dia mihoatra ny 25 taona, tokony ho raisina ho veterana ao amin'ny Ministeran'ny Atitany ianao, fa ny zon'ny tombontsoa azo avy amin'ny ...
Inona ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana fisotroan-dronono ho an'ny fahaverezan'ny mpividy?
Inona avy ireo antontan-taratasy ilaina hampiharana ny fisotroan-dronono ho an'ny sisa tavela? Ny olom-pirenena iray dia tsy maintsy mandefa fangatahana any amin'ny masoivohon'ny faritry ny fisotroan-dronono ao amin'ny Federasiona Rosiana miaraka amin'ireto antontan-taratasy manaraka ireto: 1. Pasipaoro na antontan-taratasy maha-izy azy, ...
Iza amin'ireo mpiasan'ny governemanta federaly ???
iza ny mpiasan'ny fanjakana federaly ??? Jereo amin'ny 79 FZ. Asa matihanina? Azafady: mpisolovava, mpitantana ny rafitra, dokotera, mpikirakira kaonty sns ... sns Mety ho zavatra ny asa! Ny tena lehibe dia ny olona manana ...
Ahoana marina ny fanondroana ny mari-pahaizana mamaritra ny fianakaviana mahantra?
Ahoana marina ny mari-pahaizana ho an'ny fianakaviana mahantra? Ny totalin'ny vola miditra amin'ny fianakaviana ENTIRE (ao anatin'izany ny zaza) dia raisina ary zaraina amin'ny isan'ny mpianakavy rehetra, raha tsy mahatratra ny haavon'ny fivelomana ny vokatra dia ny fianakaviana ...
ary inona no tombony ananan'ny antokom-pon'ny mpitondratena amin'ny Ady Lehibe Faharoa?
ary inona ny tombotsoan'ny mpitondratena mpandray anjara tamin'ny Ady Lehibe Faharoa? ao anatin'izany ny fahazoana trano maimaimpoana (raha ilaina) Ireto no tombony azo: - Araka ny And. 21 amin'ny lalàna federaly "On veterans" ho an'ireo mpitondratena niharam-boina ...
Miala sasatra ve ry zareo mba hikarakara ny ray aman-dreniny?
Omena fikarakarana ray aman-dreny ve ny fialan-tsasatra? Ny fialan-tsasatra dia azo omena mpiasa iray noho ny aretiny manokana, noho ny ratra nahazo azy, noho ny filàna fanarenana ara-pahasalamana, ary koa ...
Amin'ny lafiny inona no fisotroan-dronono tranainy. Ohatrinona ny habetsahana fototra sy ny habetsaky%?
Inona avy ireo ampahany amin'ny fisotroan-dronono antitra. Firy% no fototra ary ohatrinona ny fiantohana? Muscovites dia mbola mahazo rohy ara-tsosialy voasakana amin'ny fanapahan-kevitry ny fitantanan-draharaha raha toa ianao ka latsaky ny 55 taona ...
Inona ny adiresin'ny latabatry ny karama salantsalany ao amin'ny Federasiona Rosiana amin'ny fametrahana ny ampahan'ny fiantohana ny pensily amin'ny 1985 ka hatramin'ny 2001?
Inona ny adiresin'ny latabatra amin'ny karama antonony ao amin'ny Federasiona Rosiana amin'ny fikajiana ny ampaham-piantohana amin'ny fisotroan-dronono nanomboka ny taona 1985 ka hatramin'ny 2001? Misy tranonkala iray liana. hahatratra ny tahan'ny karama farany ambony ho an'ny 2000-2001 ...
Iza no mahazo tombony amin'ny fanampiana ara-tsosialy?
Iza no afaka mahazo fanampiana ara-tsosialy kendrena? Salama! Afaka mahazo fanampiana kendrena ve aho raha misoratra anarana ary mahazo tombony amin'ny fikarakarana ho an'ny zokiolona 80 taona? Tsia…
Iza no raisina ho mpivahiny? Ary ahoana no hahazoana antoka fa tena manirery ny mpisotro ronono?
Iza no raisina ho zokiolona tokan-tena? Ary ahoana no hahazoanao taratasy fanamarinana milaza fa manirery tokoa ny mpisotro ronono? ny fakana avy amin'ny boky ao an-trano dia tsy azo porofoina fa misotro ronono manirery ny olona iray, ao amin'ny trano azon'izy ireo atao ...
Inona no fanampiana amin'ny fisotroan-dronona taorian'ny taona 80?
Inona ny fanampiana ny fisotroan-dronono aorian'ny 80 taona? Ary ny reniko tamin'ny taona 80 dia nasiana rubles 1440, niaraka tamin'ny fisotroan-dronono 9194,10 roubles. Taiza no nahazoan'izy ireo vola toy izany? lazao amiko ny amin'ny alimony, ...
Azo alaina ve ny fisotroan-dronono any 50 ho an'ny renin'ny ankizy kilemaina?
Azo atao ve ny misotro ronono amin'ny 50 taona ny renin'ny zaza sembana? Tokony efa nampitandremana ianao rehefa nangataka fisotroan-dronono ho an'ny zanakao amin'ny sokajy "zaza sembana" (na, mety nampitandremana ianao, saingy adinonao), ...
Rehefa manome fahasembanana maharitra. Raha toa ny taonan'ny 2 vondrona 3 taona.
Rehefa omena kilemaina tsy voafetra. Raha ny kilema dia vondrona 2 3 taona. Ho an'ny taona faha-5. Misy vondrona sembana tsy voafetra napetraka amin'ireto tranga manaraka ireto: 1. Lehilahy sembana avy amin'ny enimpolo taona sy vehivavy ...
Ny vadin'ny mpitolona aorian'ny fahafatesan'ny vadiny dia afaka mahazo ny fisotroan-dronono tanteraka?
Mahazo mahazo ny fisotroan-drononony feno ve ny mpitondratena mpitondratena aorian'ny fahafatesan'ny vadiny? Azo inoana fa tsia. Ho an'ny lohateny, ny sanatoriums, indrisy, tsy azo raisina intsony raha tsy misy tombony manokana. Ary manao ahoana ianao…
Inona no andraikitry ny mpiasa sosialy?
Inona avy ireo andraikitry ny mpiasa sosialy? Lazao amiko hoe inona ny andraikitra sy ny lisitry ny andraikitra tsy andoavam-bola ao an-tanàna. Tokony hanana fifanarahana mifehy ny serivisy ianao. izay aloanao. SY ...
ny fandoavam-bola sy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana raha toa ka very ny mpividy
ny fandoavam-bola rehetra sy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana raha sanatria very ny mpamatsy vola, fisotroan-dronono ihany noho ny fahaverezan'ny mpitady vola. Ny habetsahana dia miankina amin'ny haben'ny karama sy ny halavan'ny serivisin'ny mpamatsy vola. Niainga tao amin'ny Tahirim-bolan'ny fisotroan-dronono.Rehefa misoratra anarana dia mandehana any ...
EDV sy EBC.
EDV sy EDK. EBC (tambin-karama isam-bolana) handoavana ny trano sy ny serivisy iombonana. EDV (fandoavam-bola isam-bolana) ho anao amin'ny fahasembanan'ny vondrona faha-3. Ny habeny feno dia 1447, 95 roubles. Ny haben'ny "fonosana sosialy" - ...
Ampidiro any amin'ny toeram-pitsaboana
Miraikitra amin'ny polyclinic miasa ao amin'ny polyclinic aho. Mazava ho azy fa tsy maintsy miraikitra amin'ny toeram-ponenana izy ireo. Manana marary marobe toy izany izy, tonga hisoratra anarana, mametraka azy ireo ao anaty solosaina isika, manondro ny toerana fisoratana anarana, ...
Inona no tokony hataonao raha very karatra sosialy ianao? inona no tokony hatao? Salanitra ve?
inona no hatao raha very ny karatra sosialin'ny Muscovite anao? ny hatao? Mandoa onitra? ho an'iza? mandehana any amin'izay nandraisanao azy, dia hataon'izy ireo vaovao ianao, fa amin'izao kosa dia hanome anao tapakila vonjimaika izy ireo hitsangatsangana Tsy maninona, avia ...
Manan-karem-pahasoavan'ny mpiasa ve ny Medaly Vasily Chuik?
Moa ve ny medaly Vasily Chuikov manome ny zon'ny mpiasan'ny asa an-tanana Ampio ny medaly nomena an'i Vasya Pupkin, dia hilamina ny raharaha. manome, nefa miaraka amin'ny medaly Honorary Donor na ho an'ny ...
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,534.